Cabdirahmaan Odowaa oo qaatay shahaadada musharaxnimo ee Kursiga Hop#069 – XAMAR POST
Cabdirahmaan Odowaa oo qaatay shahaadada musharaxnimo ee Kursiga Hop#069
By Mohamed Abdi On Mar 12, 2022
Guddiga Maamulka doorashada Galmudug oo maanta bilaabay diiwaangelinta musharixiinta ku tartameyso kuraasta kale ah Hop#069, Hop#038 iyo Hop#99, kuwaas oo deegaan doorashadoodu tahay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Kursiga Hop#069, waxaa isku diiwaangaliyay Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa), kadib markii saacado uun uu kursigaas tartankiisa ka tanaasulay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala uu ku dhaawaqay in uu iskaga haray u tartamida kursigaas oo markii hore u muuqday mid tartankiisa uu adag yahay.
Sidoo kale, Wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in uu u tanaasulay Xildhibaan Odowaa, isagoo xusay in hagankiisa uu halkaa ka sii socon doono.
Tartanka Kursiga Hop#069, maadama uu ku dhacay isbadal, waxaa uu noqon doonaa mid tartankiisu uu kusoo baxo Cabdiraxmaan Odowaa, sida muuqato oo ay dad badan qabaan..
Sidoo kale, Kursiga HOP#038, waxaa isku diiwaangeliyay musharixiinta kale ah Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan (Ambassador Dhabancad) iyo Maxamed Cabdi Aadan (Gaboobe), halka Kursiga Hop#099, waxaa isna isku diiwaangeliyay musharax Maxamed Siciid Faarax.
Diiwaangelinta kuraas Golaha Shacabka oo ka bilaabatay Gaalkacyo
Qarax ka dhacay Muqdisho oo ka dhashay khasaaro